पत्रकार ऋषि धमलालाई चुनाव र राजनीति, यो महिना मात्रै ३ वटा विदेश भ्रमण रद्द – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
पत्रकार ऋषि धमलालाई चुनाव र राजनीति, यो महिना मात्रै ३ वटा विदेश भ्रमण रद्द
असोज २२, काठमाण्डौ । देशमा राजनीतिक घटनाक्रम तिब्र रुपमा ध्रुविकरण भएसँगै पत्रकार ऋषि धमलाको व्यस्तता निकै बढेको छ । चुनाव नजिकिदै गर्दा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति बिच चुनावी तालमेल र पार्टी एकतासम्मको प्रक्रिया सुरु गरेलगत्तै धमलाको व्यस्तता बढेको हो । वाम एकताको प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको पनिप्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । त्यसको पूर्णताका लागि धमलाले महत्वपूर्ण भूमिकानिर्वाह गरेको नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।
तर यसबारेमा हाम्रा संवाददताले उनीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
राजनीतिक व्यस्तताकै कारणले नेपाली सेनाको लेबनान जाने कार्यक्रममा पनि धमला सहभागिन हुने भएका छन् । केही महत्वपूर्ण संचारगृहका पत्रकारहरु सहभागि हुने कार्यक्रममा धमला किन लेबनान गएनन् ? यस बारेमा बुझ्न खोज्दा उच्च स्रोतले भन्यो, उनी राजनीतिक गठबन्धन निर्माणमा सक्रिय छन् । त्यसैले धेरै व्यस्तता भएको र रिपोटिङमा पनि क्रियाशिल हुनुपर्ने भएकाले अन्तिममा आएर लेबनान भ्रमण रद्द गरेका हुन् ।
नेपाली सेना सुत्रका अनुसार असोज २३ गते लेबनान जानका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि धमलाले जान नसक्ने जानकारी नेपाली सेनालाई गराएको स्रोतको भनाई छ ।
त्यस्तै धमलाले अष्ट्रेलियामा भएको एनआरएनको एक कार्यक्रममा पनि जाने भनी टिकट काटिए पनि भ्रमण रद्द गरेका थिए । अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा भएको कार्यक्रममा एनआरएन अष्ट्रेलियाले निम्तो गरेको थियो । असोज ३ गतेदेखिको सिड्नीको कार्यक्रम धमलाले क्यान्सिल गरेका थिए । त्यस्तै बेलायतका नेपालीहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जाने भनिए पनि धमला गएनन् । गत असोज १० गतेदेखि हुने कार्यक्रममा उनी जाने भनिएको थियो ।
आगामी चुनावमा धादिङ जिल्ला कांग्रेसले समानुपातिकमा नाम सिफारिस गरेपछि धमलाको सक्रियता अझै बढेको हो । नाम सिफारिस गरेपछि उनलाई सासंद बन्नका लागि तयार हुन चौतर्फी दबाब बढेको छ ।
प्रमुख दलका नेताहरुले समेत सासंद बन्न दबाब दिइरहे पनि धमलाले भने यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।
अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार उम्मेदवारका लागि कुन नेता कहाँबाट सिफारिस ?
हेटौँडाबाट नै नेपाली नोट छपाईको काम हुने